ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် insulator တွင်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး HFE ဆပ်ပြာတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့,လျှပ်ကာ HFE ဆပ်ပြာတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့,HFE ဆပ်ပြာတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့
Home > ထုတ်ကုန်များ > Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ > အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် > ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် insulator တွင်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာ
1. Hydrofluoroether ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေ, ကျန်ကြွင်းမပါဘဲလွယ်ကူသောမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ကုသမှုတွင်ကောင်းသောအမှုကိုအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်;
2. HFE အလွန့်အလွန်နိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ကကောင်းစွာနိုင်ပါတယ် ပျံ့နှံ့ ထွက် နှင့်ခြေရင်းပစ္စည်းမျက်နှာပြင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအပေါက်မှလူစုခွဲနှင့်အပေါ်ယံအခွံ, စိုစွတ်စေသော, solvation နှင့်သန့်ရှင်းရေးပေါ်စံပြအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်;
3. ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာနှင့်လြှပျစစျမီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရှင်းလင်းနိုင်သည်, နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အာကာသတိုးတက်စေနိုင်တယ်,
4. အလွန်သင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် (54 ℃) နှင့်ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, စစျနိုငျ အတွက်အခန်းကဏ္ဍ ဟာရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများအေး။ Non-အန္တရာယ် ကုန်ပစ္စည်းများ , Non-မီးလောင်ရာနှင့် Non-burst, မီးကိုမဒါမှမဟုတ် flash အချက်;
5. ပစ္စည်း Coating မဟုတ်သောအဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းမဟုတ်သောဖြစ်ပါသည် - ကိုစိတျဆိုး;
7. သန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်အဆိုပါဓာတု Coating အရည်, အရှင်, ရေသန့်အားဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် လျှော့ချ ဆုံးရှုံးမှု , ကုန်ကျစရိတ်သိမ်းဆည်းပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး HFE ဆပ်ပြာတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ လျှပ်ကာ HFE ဆပ်ပြာတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ HFE ဆပ်ပြာတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့